Mogadishu Journal » Real Madrid: Waxay doonaysaa Kylian Mbappe in uu diido heshiiska cusub ee PSG
Real Madrid ayaa la sheegay inay ku kalsoon tahay inay la soo saxiixaneyso weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe xagaaga soo socda iyadoo ku dooneysa adduun dhan m 180m, ilaa iyo inta uusan xiddiga reer France qalinka ku duugin heshiis cusub.
21 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Madrid muddo ka badan sanad, laakiin kooxda reer Spain ayaa awoodi weysay inay sameyso dhaqaaq la taaban karo intii lagu jiray suuqii ugu dambeeyay sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka faafa ee coronavirus.
Mbappe ayaa sii waday wacdaraha bilowgii xilli ciyaareedkii 2020/21, isaga oo dhaliyay 7 gool iyo 7 caawiye oo magaciisa ah markii uu ciyaaray kaliya 8 kulan
Agaasimaha isboortiga PSG Leonardo ayaa dhawaan xaqiijiyay in kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ay wadahadalo la furtay ciyaartoy dhowr ah oo muhiim ah - Neymar iyo Mbappe oo ay ku jiraan - oo ku saabsan heshiisyo cusub. Marka laga hadlayo Mbappe, qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa 2022, AS ayaana haatan soo warineysa in baacsiga Real Madrid ee weeraryahanka uu gaaray heer muhiim ah.
Tani waa sababta oo ah PSG ayaa kordhinaysa dadaalkeeda ku aadan inay heshiis cusub ka saxiixdo mid ka mid ah ereyada ugu fiican erayga, taasoo la micno ah in Real ay sidoo kale ogaan doonto haddii istiraatiijiyadooda ah inay sugto inay si sax ah u dhaqaaqdo xagaaga 2021 ay ka shaqeyn laheyd iyaga. ama maya.
Psg ayaa sheegtay in Mbappe uu, dhab ahaantii, diiday seddex dalab si uu u kordhiyo joogitaankiisa Paris. Laakiin haddii uusan qalinka ku duugin heshiis cusub, Los Blancos waxay awood u yeelan doontaa inay u dhaqaaqdo isaga - waxay ku kalsoon yihiin inay awood u yeelan doonaan inay la soo wareegaan Mbappe qiimaha 'macquulka ah' ee ku dhow € 180m sanadkii 2021.
Warbixinta ayaa sii wadata inay cadeyso inay weli jirto suurtagalnimada Mbappe inuu qandaraas cusub ugu saxiixo Paris, inkasta oo lagu burburin karo qandaraaskiisa Real Madrid. Tani maahan inay ku habboon tahay Los Blancos, maadaama qiimaha shaki la’aan uu ka sarrayn doono khidmadda ay u baahan doonaan inay bixiyaan sannadka dambe - sababo la xiriira xaqiiqda ah in qandaraaska Mbappe uu dhacayo 2022.